DEG DEG: Qarax uu Fuliyey Qof Ismiidaamiyey oo Ka Dhacay Jowhar | RBC Radio	Home
Tuesday, January 15th, 2013 at 04:03 pm	/ 5 Comments Monday, January 21st, 2013 at 10:46 pm DEG DEG: Qarax uu Fuliyey Qof Ismiidaamiyey oo Ka Dhacay Jowhar
Jowhar (RBC) War goordhow naga soo gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in qof ismiidaamiyey uu ku qarxay goob ku taalla bartamaha magaalada xilli fiidnimadii ah, waxaana ku dhintay qofkii ismiidaamiyey oo kaliya.
Goobjoogayaal ayaa sheegaya in qofka ismiidaamiyey uu doonayey inuu galo masjid ku yaalla xaafada Horseed ee bartamaha magaalada ku taalla, balse intii uusan gaarin uu qarxay ruuxa sitay waxyaabaha qarxa kaasoo ku qarxay meel bannaanka ka ah masjidka.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya in dhowr dhisme oo meesha ka dhowaa uu soo gaaray burbur, mana jirin wax dad ah oo la soo wariyey in ay waxyeelo soo gaartay.
Ciidamada dawlada ee ku sugan Jowhar ayaa gaaray goobta, waxaana yaraaday dhaqdhaqaaqa dadka qaraxa ka dib, walow xaalada ay degan tahay haatan.
Qaraxyada ismiidaaminta iyo miinooyinka ayaan inta badan aan ka dhicin magaalada Jowhar marka loo eego magaalooyinka kale ee ciidamada dawlada iyo kuwa Amisom ay ka qabsadeen Al Shabaab.
1 Response for “DEG DEG: Qarax uu Fuliyey Qof Ismiidaamiyey oo Ka Dhacay Jowhar”
Diirshe says:	January 22, 2013 at 1:29 am	Abdirizak, ilama aha in kas tahay ee waa dad bani’aadan ah oo qaldami kara website. Laakiin waxaa ka muhimsan in dhagar qabahaas uu Illaahey ka qabtay Masjidka uu udan lahaa inuu isku qarxiyo, Ilaahey wuu xifdaa xarumaha lagu caabudo.